Sidee loo helaa fiisaha shaqada ee Kanada? - ALinks
Haddii aad ka timid waddan kale, waxaad u baahan tahay ruqsad shaqo oo Kanada ah si aad uga shaqeyso Kanada. Si aad uga shaqeyso Kanada, waxaad caadiyan u baahan tahay ruqsad shaqo. Xaaladaha qaarkood, waxaad ka shaqeyn kartaa Kanada fiiso la'aan ama shaqo la'aan.
Si aad u hesho fiisaha ku meel gaarka ah ee Kanada, raac afartan talaabo:
Tilaabada 1: Qaado Qiimaynta Saamaynta Suuqa Shaqada (LMIA)
Fiiso dalxiis oo ku meelgaar ah kuma siineyso xaqqa aad uga shaqeyn karto Kanada. Marka, waa inaad dalbataa fiisada shaqada ee Canda. Xaaladaha badankood, waa inaad marka hore uqalanto Qiimaynta Saamaynta Suuqa Shaqada kahor intaadan dalban Visa Shaqada Kanada ee ku meelgaarka ah.
Yaan u baahnayn inuu dalbado LMIA?
Shaqaale Xirfad Leh oo lagu hoos daboolay NAFTA heshiis;
Khibrad Caalami ah Kanada kaqeybgalayaasha (sidoo kale loo yaqaan kuwa heysta Fasaxa Fasaxa Shaqada);
Ka-qalin-jabiyaha haysta rukhsadda shaqada ku-meel-gaarka ah;
Talaabada 2: Loo-shaqeeyaha oo Kordhiyay Shaqo Ku Meel Gaadh ah
Loo-shaqeeyaha waa inuu siiyaa nuqul ah LMIA guuleysta shaqaalaha ajnabiga ah ee xirfadlaha ah oo ay la socdaan "qoraal shaqo bixin ah" oo gaar ah.
CIC waxay uga baahan tahay ganacsiyada Kanada inay diyaariyaan qandaraas shaqo oo rasmi ah, oo sidoo kale loo yaqaan "Warqad Bixin Shaqo". Marka LMIA la ansixiyo, loo-shaqeeyaha Kanadiyaanka ah wuxuu shaqaale xirfadlayaal ajnabi ah ka dhigi doonaa shaqo kumeelgaar ah.
Tilaabada 3: Shaqaale Xirfad Shisheeye ah Ayaa Codsanaya Ruqsad Shaqo
Ka dib markaad dhammayso LMIA-ga oo aad hesho “Job Offer Letter,” waxaad dalban doontaa Ruqsad Shaqo Ku Meel Gaarka ah ee Kanada. Haddii loo-shaqeeyahaagu mustaqbalka uu ku yaalo Quebec, waxaa lagaa doonayaa inaad hesho Shahaadada 'aqbalitaanka du Québec (CAQ) si aad si ku meel gaar ah uga shaqeyso. Markii aad codsaneysid rukhsad shaqaale ajnabi oo ku meel gaar ah, waxaa lagu weydiin karaa inaad la kulanto sarkaal fiiso ah oo wareysi ah. Oggolaanshaha Shaqada Kanada ayaa la siin doonaa haddii sarkaalka fiisaha ku qanco in shaqaalaha ajnabiga ah shaqadiisu aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin shaqaalaynta Kanada iyo in shaqaalaha ajnabiga ah uu ku habboon yahay kaalinta.
Tallaabada 4. Ka soo saar Ruqsad Shaqo Ku Meel Gaara oo Kanadiyaan ah
Sarkaalka Hay'adda Adeegyada Xudduudka Kanada (CBSA) ayaa soo saari doona Ruqsadda Shaqada Ku Meel Gaarka ah ee Kanada barta laga soo galo marka shaqaale ajnabi ah oo xirfad leh uu yimaado Kanada.
Ayaa u qalma ruqsadda shaqada Kanada?
Waa inaad, iyadoon loo eegin meesha aad ka codsaneyso:
Sarkaal u cadee in marka ogolaanshahaaga shaqadu dhamaado, aad ka bixi karto Kanada.
Muuji inaad haysato lacag kugu filan oo aad ku masruufo naftaada iyo qoyskaaga intaad joogto Kanada iyo markaad ku noqonayso dalkaaga.
Waa inaad raacdaa xeerarka oo aadan lahayn taariikh dembi.
Khatar amni kuma aha Kanada.
Caafimaadkaaga ha ahaato mid wanaagsan, haddii ay habboon tahayna, baaris caafimaad ayaa laguugu sameeyaa.
Uma jeedo inaan u shaqeeyo loo-shaqeeye loo qoondeeyey inuu yahay "mid aan u qalmin" diiwaanka loo-shaqeeyayaasha ku guuldareystay inuu buuxiyo shuruudaha.
Shaqo ka hel Kanada Haddii aad ku joogto fiiso arday:
Laga soo bilaabo Juun 2014, Kuwa haysta Ogolaanshaha Daraasadda Kanada ee buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka waxay awood u yeesheen inay ka shaqeeyaan ama ka baxaan xerada iyaga oo aan u baahnayn rukhsad shaqo oo gaar ah. Kuwa soo socdaa waa shuruudaha lagu muteysto in aad shaqeyso ilaa 20 saacadood usbuucii:
Oggolaansho Aqoonsi oo Kanadiyaan ah ayaa loo baahan yahay.
Waa inaad iskuqortaa sidii arday waqti buuxa ah.
Waa inaad kaqornaataa barnaamijka naqshadeynta la aqoonsan yahay ee Kanada.
Waa inuu ku sii socdaa waxbarashadda dugsiga sare ee Kanada, ama Quebec, waa inuu raacaa heerka labaad ee farsamada ama heerka dugsiga sare kadib.
Waa inaad kaqornaataa barnaamij kuu horseedaya shahaado, diblooma, ama shahaado.
Waa inaad kaqornaataa barnaamij soconaya ugu yaraan lix bilood.
Immisa lacag ah ayaad u baahan tahay fiisaha shaqada ee Kanada?
Si aad ugu qalanto degenaansho rasmi ah, hal codsade oo aan lahayn xaas ama qof wadaaga sharciga ah iyo caruurta yar yar waa inay lahaadaan ugu yaraan CAD $ 12, 960 keydka. Si aad ugu haajirto Kanada, labada isqaba waa inay haystaan ​​wadar ahaan CAD $ 16, 135 lacagta dejinta.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la helo fiisaha shaqada ee Kanada?
Waqtiga ka baaraandegidda oggolaanshaha shaqada ee Kanada ayaa leh kan ugu ballaaran. Waqtiga ka baaraandegista ee Ruqsadda Shaqada waxay ku xiran tahay dhammaystirka dalabkaaga iyo xafiiska aad ka codsatay. Oggolaanshaha Shaqada ee Kanada ayaa meel kasta ka qaadan doonta hal ilaa labaatan iyo toddobo toddobaad si loo farsameeyo.
Ma dalban karaa rukhsad shaqo oo Kanadiyaan ah shaqo la'aan?
Si aad u codsato ka mid noqoshada qorshaha gelitaanka degdegga ah, uma baahnid in lagugu siiyo shaqo. Haddii ay sidan tahay, waa inaad iska diiwaangelisaa Shaqada iyo Horumarinta Bulshada bangiga shaqada si aad ula xiriirto shaqo bixiye Canadian ah.
sida loo helo fiisaha shaqada ee canada
Nidaamyada Gaadiidka ee loo adeegsaday Jarmalka
5 maqaayadaha Indian Indian ugu sarreeya
5ta dal ee ugu sarayso Hindida si ay u haajiraan
Baro Waqtiga Ugu Fiican ee Aad Booqo Talyaani !!
Waa maxay Qaybaha iyo Tilmaamaha WordPress?